Nahavita famaranana nahomby ny fampirantiana zezika vaovao iraisam-pirenena faha-12 any Sina.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-06-25
Nahavita famaranana nahomby ny fampirantiana zezika vaovao iraisam-pirenena faha-12 any Sina. Misaotra anao tonga! Taorian'ny fandrosoana iraika ambin'ny folo taona, ny fampirantiana zezika FSHOW dia nanjary fampirantiana lehibe indrindra an'ny China International Agrochemicals and Plant Protection Exhibition (CAC). Z ...
Fampirantiana zezika vaovao iraisam-pirenena China (FSHOW)
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-05-28
YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd. dia hampiseho ny FSHOW2021 manomboka ny 22 hatramin'ny 24 Jona 2021 ao amin'ny Shanghai New International Expo Center. Fampirantiana zezika vaovao iraisam-pirenena China (FSHOW), novolavolaina ho 'teny ambava indrindra indrindra' amin'ny sahan-zezika iray amin'ny iray i matanjaka indrindra ...
Fampirantiana iraisam-pirenena momba ny fambolena sy fiompiana sy lozisialy Shina faha-22
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-04-28
FSHOW2021 dia hatao ao amin'ny Shanghai New International Expo Center amin'ny 22-24 Jona 2021. Amin'izany fotoana izany dia handray anjara amin'ny fampirantiana i Zhengzhou Yizheng Heavy Industry Machinary Co., Ltd. hampiroborobo ny fifanakalozana indostrialy sy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa. Miarahaba ny fahalalana mandroso sy vaovao amin'ny diabe rehetra ...
Ireto hevitra manaraka ireto dia tokony hojerena mandritra ny fizotran'ny zezika
tamin'ny admin tamin'ny 2020-09-21
Ny haben'ny poti-javatra vita amin'ny akora: ny haben'ny zezika amin'ny zezika sy ny akora fanampiana dia tokony ho 10mm, raha tsy izany dia tokony hotorotoroina. Mamandoana ara-nofo mety: ny hamandoana tsara indrindra amin'ny microorganism amin'ny composting dia 50 ~ 60%, ny hamandoana fetra dia 60 ~ 65%, ny hamandoana ara-nofo dia adju ...
Inona no tokony hifantohana amin'ny fikojakojana ny tsipika famokarana zezika zezika?
Ny fitaovan'ny zezian'ny kisoa dia mila serivisy fikojakojana tsy tapaka, manome fikojakojana antsipiriany ilainao ianao: mitazona ny fahadiovan'ny toeram-piasana, isaky ny avy mampiasa ny zezika biolojika dia tokony esorina tsara ny ravina granulation sy ny vilany fasika ao anaty sy ivelan'ny lakaoly sisa, mba ...
Ahoana ny fomba hampihenana ny fako amin'ny fako amin'ny fitaovana zezika biolojika
Ny fako biolojika ampiasain'ny fitaovan'ny zezika biolojika dia akora mora simika, noho izany dia mila mampiasa kamio mikatona isika hanangonana sy hitaterana ireo fako. Ireo fako biolojika ireo dia mora manome fofona ratsy, izay tsy vitan'ny hoe mandoto ny tontolo iainana ihany, fa manimba be koa ...
Zhengzhou Yizheng mavesatra indostrialy orinasa co., LTD. Nahomby tamin'ny fanatontosana ny fivoriana famintinana fanao isan-taona 2018 tamina tontolo feno fifaliana sy fandriam-pahalemana, namintina ny asa tamin'ny herintaona, nahita ny lesoka, 2019 manaova ezaka maharitra, mamorona mangirana!